စက်ကြေးပေးရတဲ့ ဖုန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » စက်ကြေးပေးရတဲ့ ဖုန်း
Posted by etone on Apr 3, 2013 in Community & Society, Critic, My Dear Diary | 25 comments
etone ဘ၀ တစိတ္တပိုင္း ေျခေထာက္ေပါက္သြားတဲ့ ဖုန္းထဲက ပိုက္ဆံ
သူများတွေ ၊ တိုင်စာ တောစာ ရွာထဲ လာတင်တုန်းက နေရာမှားပြီး လာတင်တယ် မှတ်တာ ၊ တကယ်တော့ ကိုယ်က ဉာဏ်မမှီလို့ မတွေးမိတာ ၊ စာဖတ်နေတဲ့ လူထဲရော ၊ ရွာသူ/သားတွေထဲမှာရော ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက် လူတွေပါနေတယ်ဆိုတာ လေသံကြား ဖမ်းတရားနာရင်း သတင်းရခဲ့ပါတယ် ။ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ စနစ်တကျ မဖြစ်လို့နစ်နာရတယ် ယူဆပြီး ပြောသင့်တာ ပြောပါဦးမယ် ။ ဖုန်းဘေလ်ကောက်ခံမှု စနစ် ကမောက်ကမဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ ။
ဒီလထဲမှာတင် စံချိန်တင်လောက်အောင် ခဏခဏ ထည့်လိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံကဒ် ဘယ်လောက်တောင် သုံးပစ်လိုက်လဲ ကိုယ်တိုင်မမှတ်မိပါဘူး ။ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်လု့ိ ဖုန်းပြောတာလည်း ရှည်ရှည်း ဝေးဝေးမဟုတ် ၊ အင်း ၊ အဲ ၊ ကွန်ဖမ်း ဆိုတာလောက်ပဲ ပြောဖြစ်ပါလျှက် အရင်လတွေထက် ဒီလ ပိုကုန်နေတာ လကုန်တော့မှ သတိထားမိတော့တယ် ။ ကျွန်မရဲ့ နဂို စိတ်ခံကလည်း သံသယများတယ် ၊ အခုလို ခဏခဏ ပိုက်ဆံ ကဒ်ကုန်မြန်နေတာလည်း သေသေချာချာ သိချင်လာတဲ့အတွက် ကဒ်တကဒ်ဖြည့်ပြီး စမ်းကြည့်ခဲ့ပါတယ် ။
တနေ့ကည 11 နာရီ ထိုးခါနီးမှ prepaid card ကောက်ဖြည့်ထားလိုက်ပြီး ၊ မနေ့က တနေ့လုံးနဲ့ ဒီနေ့ခုထိ ၊ စုစုပေါင်း ဖုန်းပြောချိန် မိနစ် 20 ကျော်ပဲ ရှိသေးတာ ၊ ဖုန်းဘေလ်ကောက်စစ်တော့ 850ပဲ ကျန်တယ် ။ သေချာအောင် ခဏကြာတော့ တခါ ပိုက်ဆံ ပြန်စစ်တော့လည်း ဒီအတိုင်းပဲ ။ ဒီ နှစ်ရက်မှာ ဖုန်းကနေ အင်တာနက် ဖွင့်သုံးချိန် အလွန်ဆုံး6နာရီလောက်ပဲ ရှိမယ် ။
တမိနစ် 50 x ဖုန်းပြောချိန် 22 မိနစ် = 1,100 ကျပ်
အင်တာနက် သုံးစွဲခ 4ကျပ်/မိနစ် x 360 မိနစ်(6နာရီ) = 1,440 ကျပ် (CDMA800 မို့လို့ 1မိနစ်4ကျပ်ပေးရပါတယ် )
စုစုပေါင်းမှ 2500 ကျော်ပဲကျသင့်တာ …. အခု 850 ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ဖီလင်ငုတ်ပြီး ၊ ဖုသွားတယ် ။
သံသယဖြစ်မိလို့ စမ်းကြည့်တာ ထင်နေတဲ့ အတိုင်းပဲ ၊ ဖုန်းထဲက ပိုက်ဆံ အလိုအလျှောက်ခြေထောက်ပေါက်သွားရှာတယ် ။ အရင်ကလည်း တစ်ခါ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် လက်ကျန်ငွေ 3000ကျော် ကျန်ပါသေးလျှက် ၊ ပိုက်ဆံ ပြန်စစ်တဲ့အခါ အဲ့ဒီပိုက်ဆံ ပျောက်သွားတယ် ။ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းလား ဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူးပဲ ညီမဝမ်းကွဲလေး တစ်ယောက်နဲ့ စကား စပ်မိလို့ ပြောတော့မှ သူ ့ဖုန်း(GSM) လည်း လေးထောင်ကျော်ကျန်သေးတာ ၊ ပိုက်ဆံ ပျောက်သွားတဲ့အကြောင်း ပြောရှာတယ် ။ သူ့နဲ့ ကျွန်မ ပိုက်ဆံ အဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အ ချိန် ရက်ပိုင်းပဲ ကွာပါတယ် ။ ဘယ်လို ဘယ်လို ပျောက်သွားမှန်း မသိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေအတွက် ဘယ်သူ့ဆီက သွားပြန်တောင်းရမလဲ မသိသလို ၊ ဘယ်သူရော တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လည်း မသိတဲ့အခါ ၊ ပိုက်ဆံကုန်တိုင်း ထည့်သုံး ရုံကလွဲလို့ တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ပဲ ဆုပ်လည်းစူး ၊စားလည်းရူးဆိုတဲ့ အနေထားမျိုးနဲ့ ဒီဖွတ်ဖုန်းကို စက်ကြေးပေးနေရသလိုပါပဲ ။
ငါးသိန်းဖုန်းတွေ စထွက်ပြီး ခဏကြာတော့ နယ်မြေကန့်သတ်မှုမပေးပဲ မြို့တွင်းမှာ သယ်လို့ ရ ၊ သုံးလို့ ရပြီး အင်တာနက်ပါ သုံးလို့ ရပြီဆိုတော့ ၊ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် CDMA800MHz တလုံး ကောက်ဝယ်မိလိုက်တယ် ။ မြို့တွင်းအပြင် တာဝါတိုင် ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ သုံးလု့ိရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ ဆို GSM နဲ့ နှစ်လုံး ယှဉ်ထားလျှင်တောင် GSM လိုင်းမမိတဲ့ အချိန် သူ့လိုင်းက မိနေတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း ဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ အင်တာနက်ပါ အပါပြီး စုစုပေါင်း 5သိန်း သုံးသောင်းပေးသုံးနေခဲ့တာ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပါ ။ အင်တာနက်သုံးစွဲခလည်း တမိနစ်4ကျပ်ပေမယ့် ကော်နက်ရှင်ကောင်းကောင်းနဲ့ သုံးလို့ ရလို့ အဆင်ပြေနေခဲ့တယ် ။ CDMA450 တွေ သူနဲ့ ခေတ်ပြိုင်ထွက်ခဲ့ပေမယ့် ၊ မြို့တွင်းမှာနေတဲ့လူတွေအတွက် CDMA800 တွေ အတော်လေး အရောင်းသွက်ခဲ့တယ် ။
သိပ်မကြာဘူး5သိန်း GSM တွေ စထွက်လာတယ် ခဏကြာတော့ အင်တာနက်လိုင်းတွေဖွင့်ပေးတယ် ။ အဲ့အချိန် အင်တာနက်သုံးစွဲခက တမိနစ်ကို 2ကျပ်ပါ ။ သူလည်း CDMA800 နီးပါးလောက်ထိ အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်ကောင်းခဲ့သေးတယ် ။ နောက်ပိုင်း 2သိန်း ဖုန်းတွေ ထပ်ထွက်လာပြန်တယ် ။ အဲ့ဒီနောက်မှာ CDMA800ရော ၊ GSM တွေရောရဲ့ အင်တာနက်လိုင်းက … တူတူနီးပါး ဖြစ်သွားတယ် ဒါပေမယ့် သုံးစွဲ ခကတော့ ထက်ဝက်ကြီးကွာနေပါသေးတယ် ။ အဲ့ဒီအထိ CDMA800 ဖုန်းသုံးနေရတာ မငြိုငြင်ခဲ့ပါဘူး ။
ကိစ္စရှိလို့ ခရီးလည်း ထွက်ရော ၊ မြို့ပြင်က ထွက်တာနဲ့ သုံးမရတော့ပါဘူး ။ ဘယ်မြို့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် GSM တာဝါတိုင်တွေရှိတတ်ပြီး GSMတွေ သုံးလို့ ရပေမယ့် ၊ CDMAအတွက် တာဝါတိုင်မရှိလို့ သုံးလို့ မရပြန်ဘူး ။ချွင်းချက်အနေနဲ့ တချို့မြို့တွေမှာတော့ သုံးလို့ရပေမယ့် သုံးလို့ရတဲ့ မြို့အရေတွက် အတော်လေးကို နည်းပါးပါးတယ် ။ ဘဝတူ CDMA 800 ကိုင်သူတွေ ပြောတော့မှ ဟမ်းဆက်ပြောင်းသုံးမှသာ နယ်သယ်သွားလို့ ရကြောင်း သိရပြန်တယ် ။ CDMA450 ဟမ်းဆက်ထဲ ကဒ်ထည့်သုံးမှသာ မြို့ပြင်ထွက်တဲ့အခါ သုံးလို ့ရကြောင်း သိရတယ် ။ ဖုန်းချင်း တူတူ ၊ သုံးလို့ မရဘူးဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ အချဉ်ပေါက်စ ပြုလာပါပြီ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ရန်ကုန်မှာ ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပ မဖြစ်သလောက်သုံးလို့ ရနိုင်သေးတာပဲ ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့စိတ်ဖြေပြီး သုံးရင်းက …. နောက်အားနည်းချက် တစ်ခု ထပ်တွေ့ ပြန်ပါတယ် ။
ဖုန်းသုံးစွဲချိန် သတ်မှတ်မှုမှာပါ ။ GSM ဖုန်းဆိုလျှင် ဒီဘက်က ဘယ်လောက်ခေါ်ခေါ် ၊ တဖက်ခေါ်တဲ့လူက စကိုင်တော့မှ မိနစ်ကို စတွက်တာပါ ။ CDMA800 ကတော့ အဲ့လို မဟုတ်ပဲ ဖုန်းစခေါ်တာနဲ့ မိနစ်စတွက်နေပါပြီ ။ ဥပမာ စက္ကန့် လေးဆယ်လောက်မှ တဖက်လူက ဖုန်းကိုင်ပြီး ငါးစက္ကန့်လောက်ပြောလို့ ဖုန်းချလိုက်လည်း တမိနစ်စာပေးရတာမျိုးပါ ။ ကြာတော့ ချဉ်သည်ထက် ပို ချဉ်လာပါတယ် ။ ကျေနပ်နပ် ၊ မကျေနပ်နပ် ဝယ်ထားခဲ့မိတဲ့အတွက် ဒီအတိုင်း သုံးနေရပါတယ် ။
အရင်က Deposited သွင်းနေရတဲ့ ဖုန်းတွေ prepaid ကဒ်စနစ်ပြောင်းသုံးတာ များခဲ့တဲ့ ကာလမှာလည်း ဖုန်းလ်ဘေကောက်ခံမှုတွေ ကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့လို့ ၊ details တောင်းကြည့်ပြီးမှ ဘေလ် လက်ကျန်ရှင်းခဲ့ကြသလို ၊ အလုပ်ရှုပ်မှာစိုးလို့ မတောင်းကြည့်ပဲ ဒီတိုင်း အောင့်သီး အောင့်သက်ပေးလိုက်ရတဲ့ လူတွေလည်း ရှိကြပါလိမ့်မယ် ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်မိပြီ ဆိုကတည်းက တအိအိနဲ့ ပေးရုံကလွဲပြီး တခြားနည်းက ဖုန်းပိတ်ထားရုံပဲ ရှိပါတော့တယ် ။
အခုလို ဖုန်းအမျိုးစားအလိုက် ကောက်ခံမှု စနစ် ၊အချိန်တွက်ချက်မှု မညီမျှတဲ့ အပြင် ၊ အလွဲလွဲ အချော်ချော်တွေ ဖြစ်ပြီး စည်းစနစ်မကျတာ ဖွံ ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ မွေးရာပါ အားနည်းချက်လား ၊ သေရာပါမယ့် ချူနာပါနာ ဗီဇရယ်လားလို့ ဝေခွဲမရခင်ပဲ … ဖုန်းကဒ်တစ်ကဒ် ပြေးဝယ်တာပဲ လက်တွေ့ကျတဲ့ ဖြေရှင်းမှုလို့ပဲ မကျေမနပ်နဲ့ လက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ် … ။
ဒီလ ၆ ကဒ် ထွက်သွားတယ်
ပုံမှန် သုံးကဒ် လေးကဒ်ပါဘဲ
ကျွန်တော်လည်း CDMA 800 ပါဂျာ…… အခု CDMA 450 ဟန်းဆက်နဲ ့ကိုင်နေရပါတယ်…..
ဒါပေမယ့် ဖုန်းသုံးတူချင်းအတူတူ Discrimination လုပ်တယ်အထင်ခံရလို ့….
GSM ပြောင်းကိုင်မလို ့……..
ရေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ်ပဲ မှားသလား
ကောက်တဲ့ စနစ်ပဲ မှားသလား
ဘာမှားလည်းတော့မသိဘူး ကိုယ့်ဘက်က အရှုံးချည်းပဲ
မောင်ပေလဲ စီဒီအမ်အေ ကိုင်တာ ဆိုတော့
အသိဆရာသမားတစ်ယောက်က မောင်ပေ့ ဖုန်းကို ရောင်းခိုင်းနေတာကလား
စီဒီအမ်အေ ကိုတဲ့ ထပ်မရောင်းတော့တာတဲ့ ၊ အရင်ဆာဗာတွေနဲ ့ပဲ အလုပ် လုပ်နေတာမို ့တဲ့
ထပ်ပြီး အသစ်မထဲ့ ၊ မိန်တိန်းနန် ့ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့
CDMA800 ကိုင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်လုံးရတဲ့ဈေးနဲ့ ရောင်းထုတ်တုန်းက ကိုယ်က အစွဲရှိလို့ မရောင်းထုတ်ပစ်ရက်ဘူး …. အခုမှအတော့်ကို ချဉ်လာတာ စိတ်မရှည်လျှင် ကိုင်ပေါက်တဲ့အထိပါ လုပ်ရက်နေပြီလေ
အင်တာနက်သုံးနေရင်း တိုင်ပျောက်သွားတာခဏခဏပဲ :eee:
CDMA800 အတွက် ဟန်းဆက်ကောင်းကောင်းမရှိတာနဲ့2သိန်းတန် GSM ကဒ် စရောင်းတုန်းက လဲပစ်လိုက်တယ် …
အခုတလော ၅၀၀ဝ ကျပ်တန် prepaid ကတ်တွေ မကောင်းဘူးလို့ ပြောသံကြားလို့ တစ်သောင်းတန်ကတ်ပဲ ဝယ်ဖြည်ဖြစ်တယ် … ပိုက်ဆံပိုဖြတ်တယ်လို့ သူများတွေပြောတာကြားမိလို့ ..ဘယ်လိုပိုဖြတ်တာလဲတော့ သေချာမသိဘူး ..
အခုလေးတင် ဖွဘုတ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်
CDMA800 တွေ ကို ၁၅၀ဝနဲ့ ဧပြီ ၂၄မှာစရောင်းမယ်ဆိုပဲ
ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်နာတယ် အလကားပေးလျှင်တောင် မလိုချင်တော့ဘူး :chee:
၈ နာရီသတင်းမှာ ကြေညာသွားတယ် … CDMA 800 ကို ၁၅၀ဝ ကျပ်နဲ့ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ စရောင်းတော့မယ်တဲ့ ….
စနစ်ကြောင့် မဟုတ် …
စနစ်ကြောင့် မဟုတ် ……
ကျုပ်ဘဂျီး ပြောပြောနေဒဲ့ ချကား
ခုလို အလျဉ်းလေးသင့်ဒုံး ပေါကျိဒါဘာ ..
ကျုပ်လည်း သတိထားမိဘူးရယ် …
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သဗျ ..
တစ်ခါတစ်ခါ ဘာမှ သိပ်မသုံးရသေးဘဲ ပိုက်ပိုက် ကုန်ဒါ မြန်လွန်းနေဒယ် …
နို့ .. ခုဒေါ့ နောက်တစ်ခု လာဒေါ့မယ် ဆိုဘဲ …
၁၅၀ဝ ဖုန်းဒဲ့ …
တစ်လ အနီးဆုံး ပိုက်ပိုက် ၂၅၀ဝ ဒေါ့ သုံးရမဒဲ့ ..
တစ်လ မသုံးဘဲ ထားရင် ဘာညာ သာရကာ စသည်ဖြင့် ပေါ့ဂျာ …
အိုက်ဒါလည်း ဘိုလာအုံးမယ် မသိ …
ညန်မာပီ စနစ်တွေဂဒေါ့ဖြင့် လောလောဆယ် ချင့်ယုံနေရဒါဘဲ …
ကျုပ်လဲ CDMA 800 သုံးတာဆိုတော့
တစ်ခါတစ်ခါ သိပ်မသုံးပဲ ပိုက်ဆံ ပိုကုန်သွားတာ သတိထားမိပါတယ်။
လောလောလတ်လတ် – ဒီလ (၂) ရက်နေ့မှာ ရုတ်တရက်ကြီး ပိုက်ဆံကုန်သွားတာ ကြုံရပါတယ်။
ကျုပ်ထင်တာ – အဲဒါ ဒီက EVDO စံနစ်သုံးတဲ့ CDMA ကွန်ယက်စံနစ်ကြောင့်ဖြစ်မလားမသိ-
တစ်ချို့ရက်တွေမှာ အင်တာနက်သုံးနေရင်း လိုင်းဖြတ်လိုက်ပေမယ့် (လိုင်းဖြတ်လိုက်တော့ 3G အိုင်ကွန်ပျောက်သွားပေမယ့်)
အချိန်တစ်ခုအထိ အင်တာနက်ကြေးနဲ့ ပိုက်ဆံဆက်ဖြတ်နေသလားလို့ထင်မိတယ်။
အင်း… ကျုပ်မလဲ ဘာမှမသေချာတော့ ထင်တာတွေချည်းများနေတယ်..။
အဲဒါ ဖုန်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ ဖြတ်တာ
သိ.. ဘီ.. လားးးး
(လျှပ်စစ်က မီတာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ ဖြတ်သလို သူတို့လည်း ဖြတ်တာနေမှာပေါ့)
ပထမဆုံး ကော့မန့်လေးအတွက် thank you ပါ ။
ကျွန်မလည်း ဒီလထဲမှာ ပုံမှန်ထက် နှစ်ဆနီးပါး ပိုကုန်နေတာကြောင့် သတိထားမိခဲ့တာပါ ။ စမ်းကြည့်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်း ပိုက်ဆံ လျော့နေတာကို ကြုံတာ …။ အခု အင်တာနက်သုံးတဲ့ အချိန်ကိုလည်း မှတ်ပြီး စမ်းကြည့်နေပါတယ် ။
CDMA800 နှိပ်စက်ခံရတဲ့ လူတွေ အတော်များသားပဲ .. ဟီးဟီး … ။ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ထွက်လျှင် ထန်းတပင် ကျော်တာနဲ့ လိုင်းလုံးဝပျောက်သွားပြီ … ဒီတော့ CDMA450 ဟမ်းဆက်ပြောင်းမသုံးလျှင် အဲ့ဖုန်းက သုံးမရတော့ဘူး ။ ဒါပေမယ့် မန်းလေးသွားတုန်းက …မန်းလေး၊ ပြင်ဦးလွင် ၊ စစ်ကိုင်း ၊ မင်းကွန်း တလျှောက်လုံး တောင်ကုန်းတွေ လျိုမြောင်တွေကြားရောက်နေတာတောင် လိုင်းမိနေတာတော့ တအံ့တဩဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ် ။
ဂီစိန်ကတော့ အာဟိ နိုင်မှာပေါ့ …… ညည်းတို့ ရွာမှာ ဂလို ခနော်ခနဲ့ ပိုက်ဆံဖြတ်တာမျိုး ကြုံမှ ကြုံဝူးဘဲကိုး :om:
အန်ကယ်ကြီးရေ ပိုက်ဆံဖြတ်တာကတော့ စီဒီအမ်အေမှာရော ဂျီအက်စ်အမ်မှာပါ အဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်လို့ ပြောသံကြားရပါတယ် ။ဘာလား ညာလားတော့ မသိပေမယ့် …ဖြတ်တော့ ဖြတ်သွားတယ် နေရင်း ထိုင်ရင်း …. ။ ဖုန်းဆိုတာ သုံးလျှင် ကုန်မယ် မသုံးလျှင်မကုန်ဘူး ၊ သုံးလိုက်လို့ ကုန်တာ ဘယ်လောက် ထည့်ရထည့်ရ ကျေနပ်ပါတယ် အခုလို မသိမသာရော ၊ သိသိသာသာရော ဘလိုင်းကြီး ဖြတ်ဖြတ်နေတာကတော့ အရူးကွက်နင်းနေသလိုပဲ ….. ။ တကယ့်ကို အရူးပါး လုပ်ရပ်မျိုး ။ :eee:
ကိုအံစာရေ … 1500 ဖုန်းပေါ်လာလျှင် ပိုလို့တောင် ကောင်းသွားမယ် … အရေတွက်များများ ပိုဖြတ်နိုင်တာပေါ့လေ … ။ အစပိုင်းတော့ သတိထားမိဦးမှာ မဟုတ်ဘူး ….. အခု CDMA 800 ဆို 1500မပြောနဲ့ အလကား ပေးမယ်ဆိုလျှင်တောင် မလိုချင်တော့ဘူးလေ ။
ဦးဦးပါလေရာပြောတဲ့ … အဲဒါ ဒီက EVDO စံနစ်သုံးတဲ့ CDMA ကွန်ယက်စံနစ်ကြောင့်ဖြစ်မလားမသိ-
အချိန်တစ်ခုအထိ အင်တာနက်ကြေးနဲ့ ပိုက်ဆံဆက်ဖြတ်နေသလားလို့ထင်မိတယ်။ ဆိုတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် …. ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်က အင်တာနက် ပိတ်လိုက်လို့ … အိုက်ကွန်ပျောက်သွားပေမယ့် …. သူများ စာရိုက်တဲ့အခါ ဝင်လာမှ အင်တာနက်ပွင့်နေမှန်း သိတာမျိုး ကြုံဖူးပါတယ် ။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အင်တာနက်ပိတ်ပြီးတာနဲ့ … အိုက်ကွန်ပျောက်မပျောက်စစ်တဲ့အပြင် တချို့ applicationတွေမှာ အင်တာနက်လိုင်းပြတ်သွားတာနဲ့ အလမ်းလုပ်တာရှိတယ် ။ အဲ့လို application ဖွင့်ပြီး လိုင်းတကယ်ပြတ်မပြတ် ပြန်ပြန်စစ်နေရပါတယ် … ။
ကိုရွာစားကျောရေ … ထိန်းသိမ်းခဆိုလည်း ဗရမ်းဗတာ ၊ စာရင်းမရှိ အင်းမရှိ ။ ပေါက်လွတ်ပဲစား ထိန်းသိမ်းတဲ့ လူတွေကောက်တဲ့ အဖိုးခ ပဲ ဖြစ်ရမယ် … ခိခိ :harr:
ညလေး အိတုံ ပို့စ် ဖတ်၊ ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပီး လက်ရှိကိုင် နေတဲ့ 800 ကြီးကို မြောင်းထဲ လွှင့်ပစ်လိုက်တော့မယ်…
ဖုန်းကဒ်မှာ စစ်ဖို့လွယ်ပေမယ့် လိုင်းဖုံးတွေမှာကျတော့ စစ်ဖို့မလွယ်ဘူး။
မှတ်မှတ်ရရ တစ်လလုံး ပျက်နေတဲ့ လိုင်းဖုံးက ၄၀၀၀-၅၀၀ဝ လောက်ကျတယ်။
ဖုံးရုံးသွားပြောတော့လည်း Call List ထုတ်ပြီး စစ်နိုင်တာက လွဲရင် ဘာမှ လုပ်လို့မရ။
စိတ်တိုတိုနဲ့ ဖုံးခမဆောင်ပဲထားလိုက်တာ ဖုံးလိုင်းဖြတ်တာတော့ သေချာသားးးးး
ပိုစ့်လေး ပိုလှစေချင်လို့ ပြောရမယ်နော်။
စက်ကြေး အစား ဆက်ကြေး လို့ ပြောင်းလိုက်ရင် ပိုလှသွားမယ်။ :hee:
အဟီး .. အန်တီမမရေ .. သတ်ပုံပြင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ … ။
တကယ်တော့ .. အတင်းအဓမ္မတောင်းခံငွေညှစ်တဲ့ ဆက်ကြေးနဲ့ … စက်ပစ္စည်း အဖိုးခ စက်ကြေးနဲ့ …. မကွဲပြားတာ အမှန်ပါ ။ ဆ လုံးလား စလိမ်လား မသိတော့ ခေါင်းစဉ်ကြီးမှာ ထင်တာနဲ့ ရမ်းတပ်လိုက်တာ .. ခိခိ … :hee:
မနိုရဲ့ CDMA800လည်း March လထဲမှာ ငွေပိုပြီးကုန်တယ်
12/03/2013 က ငွေထဲ့ပြီးစစ်လိုကတော့ 13187.70ကျပ်
30/03/2013 ကလက်ကျန်ပြန်စစ်လိုက်တော့ 5702.50ကျပ်ပဲရှိတော့တယ်
အမလဲ ၈၀ဝ ဖုန်းပဲ။ အမက ဖုန်းဆက်တာအင်မတန်နဲတယ်။ လိုင်းဖုန်းပဲပြောဖြစ်တာများတာကိုပဲ ၅၀၀ဝ ကဒ်ထဲ့ထားရင် နှစ်လလောက်ဆိုကုန်ဘီပဲ။ ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး။ အင်တာနက်လဲမသုံးဘူး။ သူများတွေ ပြောတာကတော့ ၈၀ဝ တွေက မိနစ်အတိဖြတ်တယ်တဲ့။ ကိုယ်က ဆက်တာ ၁ မိနစ်မပြည့်လဲ ၁ မိနစ်စာဖြတ်တယ်ပြောတာပဲ။ ဟုတ်လားတော့မသိဘူး။ My ringtune ထည့်တော့ပိုဆိုးရော။ ကိုယ်လဲမသုံးပဲ သူချည်းသုံးသွားတာ တလနှစ်ထောင်။ အခုတော့ My ringtune လဲဖြုတ်လိုက်ပြီ။ တုန်တုန်ပြောမှ သတိထားကြည့်လိုက်တော့မယ်။
အစ်မသဲရေ .. စံချိန်တင်ပါတယ် … 5000တန် တကဒ် 2လ သုံးလို ့ရတယ် ဆိုလို့ပါ ။
CDMA 800 ရဲ့ အားနည်းချက်ထဲ အဲ့ဒါလည်း ပါတယ် .. ဆက်တာ စက္ကန့်ပိုင်းပေမယ့် မိနစ်နဲ့ ဖြတ်ယူတာရယ် … တဖက်က မကိုင်ပဲ တက်နေတဲ့ စက္ကန့်တွေကိုပါ ထည့်တွက်ယူတာရယ်တွေ ရှိတယ် … ။
ဒါကြောင့်လည်း အခု 1500ဖုန်းတွေကို CDMA800တွေ အရင် ထုတ်ပစ်လိုက်သလားလို့ …. တွေးမိပါတယ် … ။
ဟင့်မသုံးဘဲကုန်ဒါဘာရှို။ နာ့ဂိုငိုချင်အောင်လုပ်နေဘီ။ သူများဂတပါတ်လံးမှ အပြင်ထွက်ရင် တကော နှစ်ကောထက်ပိုမပြာဘဲဟာ။ ဘီလိုလုပ်နှစ်လဘဲခံဒယ်မတိ။
ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ဖုန်းကိစ္စက ဘယ်တော့များမှ …အေးမလဲမသိ….
ကိုအလင်းဆက်ရေ အေးဖို့တော့ မမြင်သေးဘူးဗျ အခုထပ်လာမယ်လေ ၁၅၀ဝ နဲ့။